प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुने वातावरण बनेको छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ [अन्तर्वार्ता]
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा चुलिएको संकट समाधानका निम्ति दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको दौडधूप चलिरहेको छ। तर पछिल्ला केही दिनमा दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच आरोपप्रत्यारोपको श्रृङ्खला तीव्र भएपछि पार्टी विभाजनकै सन्निकट उभिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
आइतवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली उपस्थित नभएपछि प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । तर ओलीले पत्रमार्फत 'आरोपपत्र'मा छलफल हुने बैठकमा आफू उपस्थित नहुने अडान लिए ।
ओली पक्षका सबै स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा ओलीमात्र उपस्थित नहुनुले ओली एक्लिएको सन्देश बाहिरिएको छ । यिनै विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका थिए ।
प्रस्तुत छ, अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश -
पार्टीभित्र प्राविधिक विषय समाधान हुन नसकेर बल्झिएको संकट हो कि राजनीतिक र सैद्धान्तिक बहसकै क्रममा पैदा भएको संकट हो ?
यो धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यो लडाईंको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । कुनै वैचारिक र दार्शनिक आधार छैन । कुनै राजनीतिक आधार छैन । खाली इगोको कुरा मात्र छ । केपी ओलीले एक्लै गर्‍यो, हाम्रो मानमनितो राखेन। हामीले पाएनौं भन्ने कुरा मात्र छ ।
एउटा प्राविधिक विषयको लडाईं हो । नेताहरूको सांस्कृतिक स्तरको स्खलन भएका कारणले उत्पन्न भएको इगो क्राइसिस हो यो ।
तर भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले त पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि हुने कुराको सुनिश्चित गरेको थियो नि ! तर पनि ओलीले किन सुरक्षित महशुस गरिरहेका छैनन् त ?
प्रधानमन्त्रीले असुरक्षित महशुस गरेको होइन । तर तिमी असुरक्षित छौ भनेर बारम्बार सन्देश दिने काम भएको छ । उहाँले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ नि, तिमीहरूले जे सुकै हर्कत गर, पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री त म चलाउँछु । महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि मै रहन्छु ।
तर स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा निर्णय गरेको होइन र ?
अहिले प्रधानमन्त्रीले सरकार प्रमुखको हैसियतले स्थायी कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेन भन्ने मात्र छ । एकपटक स्थायी कमिटीको निर्णयलाई फर्केर हेरौं न । के भनिएको थियो भने एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने, अर्को अध्यक्षले पार्टी र संगठन चलाउने । तर एउटा अध्यक्षले पार्टी चलाउँदै गर्दा अर्को अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने र सरकार चलाउनेले पनि अर्को अध्यक्षको सहमति लिने ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम गरिरहनुभएको छ । तर संगठनको जिम्मा लिएको अध्यक्षले संगठनको काम किन नगरेको ? कमरेड प्रचण्डले त भोलिपल्टदेखि नै पार्टी एकताका कामहरू तत्काल पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्ने होइन र ?
एउटा पार्टीको एकता र एकीकरणको अभियानलाई पूरा गर्ने कुरा थियो, अर्को एकताको महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने थियो ।
एकताका कामहरू के-के बाँकी छन् ?
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् बनाउनुपर्ने थियो । दुईवटा धारबाट नाममा सहमति गरेर घोषणा गर्दिने त हो नि ! अनि जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च बनाउनुपर्ने छ । निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग पूरा गर्नुपर्ने थियो । विभागहरू पूरा गर्नुपर्ने छ । अध्यक्ष, सचिव, इञ्चार्ज त छँदै छन्, बाँकी गर्नुपर्ने छ ।
आधाभन्दा बढी जनसंगठनको एकता बाँकी छ । इञ्चार्ज, सह-इन्चार्ज तोकेको छ । अध्यक्ष र सचिव तोकेको छ । अस्थिपञ्जर मात्र दिएको छ, मांशपेशी त पूरा गर्नुपर्‍यो । त्यो काममा प्रचण्डले एक सेकेन्ड पनि बिताउनुभएको छैन ।
अर्को कुराचाहिँ महाधिवेशनको तयारी गर्नका लागि दुवै पार्टीहरूको सदस्यता यकिन गर्नुपर्‍यो । तिनीहरूको नवीकरण गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि महाधिवेशनका लागि दस्तावेज समिति यो हो, प्रतिनिधि तयारी समिति यो हो, आवास तयारी समिति यो हो, मञ्चको तयारी समिति यो हो भनेर तयारी गर्नुपर्ने हो । यो काम त भएकै छैन । कसैले प्रचण्डलाई यो काम किन भएन भनेर सोध्नुपर्ने हो नि !
केपी ओलीले काम गरेन भनेर मात्र भनेको छ, बसेको छ, यसरी हुन्छ र भन्या ?
बैठक बसेर औपचारिक निर्णय लिएको दिन पार्टी फूटको बिन्दु हुनेछ भनेर ओलीले भनेका छन् नि, एकीकरणका काम सम्पन्न हुन पनि बैठक बस्नुपरेन र ?
यो वाक्य मात्र नभन्नुस् न तपाईंले। अर्को दिशातर्फ गइहाल्छ नि ! पार्टीको विधानले दुवै अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा तयार गरेर बैठक बस्नुस् भन्छ तर प्रचण्ड त्यसमा सहमत नहुने । एक्लाएक्लै चल्न खोज्ने र बहुमत देखाएर बैठक माग गर्ने ।
अहिले पार्टी सामान्य अवस्थामा छैन । अहिले त संक्रमण नै छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा अल्पमत र बहुमत भनेकै छैन । बल मिचेर र टाउको गनेर बैठक बस्यो भने विभाजन हुन्छ भनेर ओलीले भनेको हो ।
प्रथम अध्यक्ष भनेर ओलीले आफैंलाई घोषणा गरेका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष पनि मै हुँ भनेर भनेका छन् । तर एकताका काम भएनन् भनेर प्रचण्डमाथि आरोप लगाउने कस्तो तर्क हो ?
दुईवटा अध्यक्षले स्वीकारेको कुरा हो । प्रथम भन्ने कि नभन्ने अलग कुरा हो तर पार्टी वरीयतामा ओली पहिलो हो भनेर प्रचण्डले नै स्वीकारेको कुरा हो । सिनियर अध्यक्ष ओली नै हो । डेढ वर्षसम्म बैठकहरूको अध्यक्षता त ओलीले नै गरेको हो । प्रचण्ड जुनियर अध्यक्ष हो । दुईवटा अध्यक्षको प्रावधान नराखिकन एकता नहुने भएकाले दुई अध्यक्ष स्वीकारेको हो ।
माले र मार्क्सवादी मिल्दा मदन र मनमोहन दुवै अध्यक्ष हुनुभएको थियो र ? प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस एकीकरण हुँदा देउवा र गिरिजा दुवै सभापति हुनुभएको थियो र ?
हाम्रोमा के भयो भने, एकता भड्काउने तत्वहरूले खेल्न खोजे । दुई अध्यक्ष भए एकता हुने, नत्र नहुने भनेपछि दुई अध्यक्ष राखेको हो । दुई जना अध्यक्षले पालैपालो सरकार चलाउने स्थितिमा एकता हुने नत्र नहुने भन्ने भयो । के हाम्रो विचारले त्यही भन्थ्यो त ?
जुन बेला पार्टी एकता गर्दै थियौं, भर्खर चुनाव सकेका थियौं । चुनावको परिणामले ७० र ३० देखायो नि ! ७० र ३० बराबर हो त ?
अध्यक्ष प्रचण्डले त आफूले त्याग गरेका कारण पार्टी एकता सम्भव भयो भनेका छन्, त्यसमा असहमति हो तपाईंको ?
२५-३० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको पार्टीसँग एकता गर्दा केन्द्रीय र विभिन्न कमिटीमा ४० प्रतिशत दिनु प्रचण्डको उदारता हो कि ओलीको उदारता हो ? तुलना गर्नुस् न ! अहिले प्रचण्डले आधा पाएको प्रधानमन्त्री छाडेको भन्दै व्याख्या भइरहेको छ । प्रचण्डलाई धेरै त्यागी नेताको रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
प्रचण्ड पनि गठबन्धनको नेतै हो तर ओलीको मुख हेर्नुपर्छ भनेर पार्टीका धेरै नेताहरूले भनेपछि प्रचण्डले गत सालको मंसिरमा आधा-आधा कार्यकाल छाडेको हो । त्यो प्रचण्डको एउटा सदासयता भने हो । त्यसलाई मान्नुपर्छ ।
नियुक्ति र भागबण्डामा कुरा मिले पार्टी मिलिहाल्छ भन्ने तपाईंको तर्क थियो । तर भागबण्डाले त संवैधानिक दायरा मिचेको हुँदैन र ?
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा त हाम्रो पार्टीको निर्णय यो हो भनेर जाने होइन । बाहिर जेसुकै सहमति भएपनि त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने हो । उदाहरणका लागि जनजाति आयोगको अध्यक्ष ओलीले लिने भए ओलीले दिएको मान्छेलाई राख्ने हो । प्रचण्डको भागमा परेको नियुक्तिका लागि प्रचण्डले मान्छेको नाम दिने भनेको हो ।
प्रथम भन्ने कि नभन्ने अलग कुरा हो तर पार्टी वरीयतामा ओली पहिलो हो भनेर प्रचण्डले नै स्वीकारेको कुरा हो । सिनियर अध्यक्ष ओली नै हो । डेढ वर्षसम्म बैठकहरूको अध्यक्षता त ओलीले नै गरेको हो । प्रचण्ड जुनियर अध्यक्ष हो । दुईवटा अध्यक्षको प्रावधान नराखिकन एकता नहुने भएकाले दुई अध्यक्ष स्वीकारेको हो ।
तपाईंलाई ओलीनिकट नेता मानिन्छ । राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । नेकपाको नेता हुँदै गर्दा तपाईं प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हो । पार्टी विवाद मिलाउन झण्डावाला गाडीमा चढेर हिँड्दा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्न असहज हुँदैन ?
प्रदेशको काम ह्याम्पर भएकै छैन । आज प्रदेश फर्किँदैछु । राति दुई बजे पनि उठेर आउन सक्छु । स्रोत र साधन छन् । पार्टीको नेता भएरै म मुख्यमन्त्री भएको हो । मुख्यमन्त्रीका नाताले जनताको कामहरू धेरै गर्नुपर्छ ।
तर पार्टी कमजोर भयो, एकता भत्क्यो भने मेरो आधार पनि त खस्किन्छ नि ! सबै बेकार हुन्छ । त्यसैले पार्टीको काममा पनि उत्तिकै लाग्नुपर्छ । यता कति भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्‍यो । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्नुपर्‍यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईको पछिल्लो भेटघाट कहिले भयो र के कुरा भयो ?
सोमवार नै भेट भएको थियो । पार्टी विभाजन हुन नदिने, दुई अध्यक्षबीचको संवादलाई अझ बढी घनिभूत बनाउने, दुवै अध्यक्षले त्याग गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा कुराकानी भए । मैले मात्र जित्छु भन्ने हो भने अर्को पक्ष हार्न तयार नै हुँदैन । मुठभेडतिर परिस्थिति जान्छ भनेर सल्लाह दिएको छु ।
पार्टीलाई बचाएर लैजानुपर्‍यो। रुख भइरहेपछि सुन्तला त अर्को मौसममा फलिहाल्छ नि ! हिजो ओलीले जुन पत्र पठाउनुभएको छ, प्रचण्ड कमरेडले उतातिर आरोपपत्र नै एजेन्डा हुन्छ भनिरहनुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले म बैठकमा जान्न भन्नुभयो । हामीले तपाईं नगए पनि हामी जान्छौं भनेर मैले भनें ।
स्थायी कमिटी बैठकमा ओली मात्र अनुपस्थित हुनुले तपाईंहरूले उनको साथ छाडेको भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ बाहिर । के भन्नुहुन्छ ?
हामीलाई त उहाँले बैठकमा जान रोक्नुभएन । उहाँले आफ्नो इथिकल कुराहरू उठाउनुभएको छ । आफूमाथि लागेको आरोप पत्रमाथि छलफल गर्ने बैठकमा उहाँ नजानु सही नै हो । दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सहमतिका आधारमा बैठक बोलाइएको पनि होइन । बलजफ्ती ढंगले एकतर्फी एजेन्डामा छलफल हुने बैठकमा उहाँ जानु हुँदैनथ्यो।
तर बाहिर मान्छेहरूले ओली बैठकमा गएनन् भनेर हल्ला चलाए । बैठकबाट भागे, पार्टीलाई असहयोग गरे भनेर देखाउनु भएको छ ।
अब २८ गते बस्ने स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री उपस्थित होलान् ? गएदेखि त्यसको आधार के ?
अस्ति बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रचण्डको आरोप पत्रमाथि छलफल गर्ने भनेर एजेन्डा तय गरेको छैन । बरू पार्टीको संकट समाधानका निम्ति बैठक भनेर भनेको छ । त्यसले प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुने आधार बनेको छ । प्रधानमन्त्री बैठकमा जानका लागि ढोका खुलेको छ । दुई अध्यक्षबीच पनि संवाद हुन थालेको छ ।
हिजोको बैठक अघि पनि उहाँहरूबीच कुराकानी भएको भन्ने छ । तर एजेन्डामा भने सहमति भएन ।
तपाईले प्रचण्डसँग कतिपटक भेट गर्नुभयो ?
मैले प्रचण्डलाई पछिल्लो समय भेटेको छैन । विवाद शुरू हुँदा एकपल्ट भेटेको थिएँ । हाम्रो टीमले नै कुराकानी गरिरहेको छ। त्यसैले जिम्मा लिएको छ । हाम्रो टीम त सल्लाहले काम गरिरहेको छ ।